Ahoana no hihaonantsika amin'ireo tsy mpino? - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Fiainana miaraka amin'Andriamanitra > Ahoana no fomba hiatrehantsika ireo tsy mpino?
Mitodika aminao aho miaraka amina fanontaniana lehibe: Ahoana ny hevitrao momba ny tsy mpino? Heveriko fa fanontaniana tokony hodinihintsika rehetra ity! Chuck Colson, mpanorina ny Prison Fellowship sy ny programa Breakpoint Radio any Etazonia, indray mandeha dia namaly ity fanontaniana ity tamin'ny fanoharana iray: Raha misy jamba manitsaka ny tongotrao na manondraka kafe mafana amin'ny akanjonao, ho tezitra aminy ve ianao? Izy tenany ihany no mamaly fa mety tsy ho antsika izy io, satria tsy mahita ny maso eo alohany ny jamba.
Tsarovy ihany koa fa ny olona izay tsy mbola nantsoina hino an’i Kristy dia tsy afaka mahita ny fahamarinana eo imasony. Noho ny Fahalavoana dia jamba ara-panahy izy ireo (2. Korintiana 4,3-4). Fa amin’ny fotoana mety indrindra, ny Fanahy Masina dia manokatra ny mason’izy ireo ara-panahy mba hahitany (Efesiana 1,18). Nantsoin’ny Rain’ny Fiangonana ho fahagagana amin’ny fahazavana io fisehoan-javatra io. Raha izany no izy, dia azo inoana fa nino ny olona; afaka nino izay hitan’ny masony.
Na dia misy aza ny olona sasany, na dia eo aza ny mason'izy ireo, misafidy ny tsy hino, ny finoako ny ankabeazan'izy ireo dia handray tsara amin'ny antso mazava amin'Andriamanitra ny ankamaroany. Mivavaka aho fa hanao izany tsy ho ela izy ireo fa tsy ho avy mba hahafahany miaina ny fiadanam-po sy fifaliana amin'ny fahafantarana an 'Andriamanitra ary hanambara amin'ny hafa momba an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao.
Mino izahay fa ekentsika fa ny tsy mpino dia manana hevitra diso momba an'Andriamanitra. Ny sasany amin'ireo hevitra ireo dia vokatry ny ohatra ratsy avy amin'ny Kristianina. Ny hafa kosa dia avy amin'ny hevitra tsy mitombina sy maminavina momba an'Andriamanitra izay re nandritry ny taona maro. Ireo fiheverana diso ireo dia mampivoatra ny fahajambana ara-panahy. Ahoana no fihetsikantsika ny tsy finoan'izy ireo? Mampalahelo fa misy kristianina maro mihetsika amin'ny fananganana rindrina fiarovana na ny fandavana mafy aza. Amin'ny fananganana ireo rindrina ireo dia tsy takian'izy ireo ny zava-misy fa ny tsy mpino dia manan-danja amin'ny Andriamanitra mpino. Adinon'izy ireo fa ny Zanak'Andriamanitra dia tonga teto an-tany tsy ho an'ny mpino fotsiny.
Rehefa nanomboka ny fanompoany teto an-tany i Jesosy dia tsy nisy Kristianina — tsy mpino ny ankamaroan’ny olona, ​​eny fa na dia ny Jiosy tamin’izany fotoana izany aza. Soa ihany anefa fa naman’ny mpanota i Jesosy, mpisolovava ny tsy mino. Nazava taminy fa “tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, fa ny marary.” (Mat 9,12). Nanolo-tena hitady ireo mpanota very mba hanaiky Azy sy ny famonjena natolony azy ireo Jesosy. Noho izany dia nandany ny ampahany betsaka tamin’ny fotoanany niaraka tamin’ny olona izay noheverin’ny hafa ho tsy mendrika sy tsy noraharahaina. Nantsoin’ny mpitondra fivavahana jiosy àry hoe “amboadia sy mpisotro divay ary naman’ny mpamory hetra sy ny mpanota” i Jesosy (Lioka). 7,34).
Ny filazantsara dia manambara ny fahamarinana amintsika; Jesosy Zanak’Andriamanitra dia tonga olombelona izay nonina teo amintsika, maty ary niakatra tany an-danitra; nanao izany ho an’ny olona rehetra Izy. Milaza amintsika ny Soratra Masina fa tia “izao tontolo izao” Andriamanitra. (Johanes 3,16) Mety hidika fotsiny izany fa tsy mpino ny ankamaroan’ny olona. Andriamanitra iray ihany no miantso antsika ho mpino, toa an’i Jesosy, mba ho tia ny olona rehetra. Noho izany dia ilaintsika ny fahafantarana fa tsy mbola mino an’i Kristy izy ireo, dia ireo izay Azy, izay nahafatesan’i Jesosy sy nitsanganany tamin’ny maty. Indrisy anefa fa sarotra ho an’ny Kristianina maro izany. Toa ampy ny Kristianina vonona hitsara ny hafa. Nambaran’ny Zanak’Andriamanitra anefa fa tsy tonga hanameloka izao tontolo izao izy fa hamonjy azy (Jao 3,17). Mampalahelo fa ny Kristianina sasany dia mazoto mitsara ny tsy mpino ka tsy miraharaha tanteraka ny fomba fijerin’Andriamanitra Ray azy ireo - amin’ny maha-zanany malalany azy. Ho an'ireo olona ireo dia naniraka ny zanany ho faty ho azy ireo izy, na dia tsy mbola nahalala na tia azy aza izy ireo. Mety hihevitra azy ireo ho tsy mino na tsy mino isika, fa Andriamanitra kosa mahita azy ireo ho mpino ho avy. Alohan'ny hanokafan'ny Fanahy Masina ny mason'ny tsy mino, dia voahidy amin'ny fahajamban'ny tsy finoana izy ireo - misafotofoto amin'ny hevitra diso ara-teôlôjia momba ny maha-Andriamanitra sy ny fitiavany. Ao anatin'ireo fepetra ireo indrindra no tsy maintsy tiantsika azy ireo fa tsy misoroka na mandà azy ireo. Tokony hivavaka isika fa rehefa manome hery azy ireo ny Fanahy Masina, dia hahazo ny vaovao mahafaly momba ny fahasoavan’Andriamanitra mampihavana izy ireo ary hanaiky ny fahamarinana amim-pinoana. Enga anie ireo olona ireo hiditra amin’ny fiainam-baovao eo ambany fitarihan’Andriamanitra sy ny fitondrany, ary ny Fanahy Masina anie hanampy azy ireo hiaina ny fiadanana izay nomena azy amin’ny maha-zanak’Andriamanitra azy.
Rehefa misaintsaina ny tsy mpino isika, dia aoka isika hahatsiaro ny didin’i Jesosy hoe: “Mifankatiava ianareo”, hoy izy, “toy ny nitiavako anareo” (Jaona 1.5,12). Ary ahoana no fitiavan’i Jesosy antsika? Amin’ny famelana antsika handray anjara amin’ny fiainany sy ny fitiavany. Tsy manangana rindrina hampisaraka ny mpino sy ny tsy mino Izy. Lazain’ny Filazantsara fa tia sy nanaiky ny mpamory hetra sy ny mpaka vadin’olona sy ny boka ary ny boka i Jesosy. Ny fitiavany koa dia ireo vehivavy ratsy laza, ireo miaramila naneso sy nikapoka Azy, ary ireo jiolahy nohomboana teo anilany. Raha nihantona teo amin’ny hazo fijaliana Jesosy ka nahatsiaro ireo olona rehetra ireo, dia nivavaka Izy hoe: “Raiko ô, mamelà ny helony; satria tsy fantany izay ataony!" (Lioka 23,34). Jesosy dia tia sy manaiky ny rehetra mba hahazoan’izy rehetra famelan-keloka avy Aminy, amin’ny maha-Mpamonjy sy Tompony azy, ary ho velona amin’ny firaisana amin’ny Rainy any an-danitra amin’ny alalan’ny Fanahy Masina.
Manome antsika anjara amin'ny fitiavana ny tsy mpino i Jesosy. Raha manao izany isika dia mahita azy ireo fa olona nomen'Andriamanitra, izay noforoniny sy havotany, na dia mbola tsy fantatr'izy ireo aza ilay tia azy. Raha mitazona io fomba fijery io isika dia hiova ny fihetsitsika sy ny fihetsiktsika amin'ny tsy mpino. Izahay dia hanaiky azy amin'ny fiadiana misokatra ho toy ny vehivavy kamboty sy tsy manana fianakaviana izay mbola tsy mahalala ny tena rainy; toy ny rahalahy sy anabavy very tsy nahalala fa mifandraika amintsika amin'ny alalan'i Kristy. Hiezaka hihaona amin'ny tsy mpino miaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra isika mba hahafahan'izy ireo mandray ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany koa.
Ahoana no ahafahantsika mihaona tsy mpino?